Kungani Ukuxhumana Kwethimba Kubaluleke Kakhulu Kunesitaki Sakho SeMartech | Martech Zone
Umbono kaSimo Ahava onypical ngekhwalithi yedatha nezinhlaka zokuxhumana uvuselele lonke igumbi lokuphumula e Iya ku-Analytics! inkomfa. I-OWOX, umholi we-MarTech esifundeni se-CIS, wamukele izinkulungwane zochwepheshe kulo mbuthano ukuze babelane ngolwazi nemibono yabo.
Ithimba le-OWOX BI ngithanda ukuthi ucabange ngomqondo ophakanyiswe nguSimo Ahava, onamandla wokukhulisa ibhizinisi lakho.
Ikhwalithi Yemininingwane Nekhwalithi Yenhlangano
Ikhwalithi yedatha incike kumuntu oyihlaziyayo. Imvamisa, singasola konke ukushiyeka kudatha kumathuluzi, ukuhamba komsebenzi, nakuma-database. Kodwa ingabe lokho kunengqondo?
Ukukhuluma ngokusobala, ikhwalithi yedatha ihlobene ngqo nendlela esixhumana ngayo nezinhlangano zethu. Ikhwalithi yenhlangano inquma konke, kuqala ngendlela yokumba idatha, ukulinganisa, nokukala, ukuqhubeka nokusebenza, futhi kugcine ngekhwalithi ephelele yomkhiqizo nokwenza izinqumo.
Izinkampani kanye Nezakhiwo Zabo Zokuxhumana
Ake sicabange ukuthi inkampani igxile kuthuluzi elilodwa. Abantu abakule nkampani bakhulu ekutholeni izinkinga ezithile nasekuzixazululeni kwesigaba se-B2B. Konke kuhle, futhi ngokungangabazeki uyazi izinkampani ezimbalwa ezinjengalezi.
Imiphumela emibi yemisebenzi yalezi zinkampani ifihliwe enkambisweni yesikhathi eside yokuphakamisa izidingo zekhwalithi yedatha. Ngasikhathi sinye, kufanele sikhumbule ukuthi amathuluzi enziwe wokuhlaziya idatha esebenza ngedatha kuphela futhi ahlukanisiwe nezinkinga zebhizinisi - noma ngabe zenzelwe ukuzixazulula.
Yingakho olunye uhlobo lwenkampani luvele. Lezi zinkampani zikhethekile ekususeni amaphutha kokuhamba komsebenzi. Bangathola inqwaba yezinkinga ezinkambisweni zebhizinisi, bazibeke ebhodini elimhlophe, bese batshela abaphathi:
Lapha, lapha, nalaphaya! Sebenzisa lelisu lebhizinisi elisha uzobe usulungile!
Kepha kuzwakala kukuhle kakhulu ukuba kube yiqiniso. Ukusebenza kahle kwezeluleko ezingasekelwe ekuqondeni amathuluzi akungabazeki. Futhi lawo mafemu abonisanayo ajwayele ukungazi ukuthi kungani kwavela lezozinkinga, kungani usuku ngalunye olusha luletha ubunzima obunzima namaphutha, nokuthi yimaphi amathuluzi abekwe ngokungafanele.
Ngakho-ke ukuba lusizo kwalezi zinkampani zizodwa kunqunyelwe.
Kunezinkampani ezinolwazi lobuchwepheshe kwezamabhizinisi nolwazi lwamathuluzi. Kulezi zinkampani, wonke umuntu ukhathazekile ngokuqasha abantu abanezimfanelo ezinhle, ochwepheshe abaqinisekile ngamakhono nolwazi lwabo. Kulungile. Kepha ngokujwayelekile, lezi zinkampani azihlosile ukuxazulula izinkinga zokuxhumana ngaphakathi kweqembu, ezivame ukuzibona zingabalulekile. Ngakho-ke njengoba kuvela izinkinga ezintsha, ukuzingelwa kwabathakathi kuqala - iphutha likabani? Mhlawumbe ochwepheshe be-BI badidanise izinqubo? Cha, abahleli bezinhlelo abayifundanga incazelo yezobuchwepheshe. Kepha kukonke, inkinga yangempela ukuthi iqembu alikwazi ukucabanga ngaleyo nkinga ngokucacile ukuyixazulula ndawonye.
Lokhu kusikhombisa ukuthi ngisho nasenkampanini egcwele ochwepheshe abapholile, konke kuzothatha umzamo omkhulu kunesidingo uma inhlangano ingekho abavuthiwe kwanele. Umqondo wokuthi kufanele ube umuntu omdala futhi ube nesibopho, ikakhulukazi esimweni esibucayi, yinto yokugcina abantu abacabanga ngayo ezinkampanini eziningi.
Ngisho nengane yami eneminyaka emibili eya enkulisa ibonakala ivuthiwe kunezinye izinhlangano engisebenze nazo.
Awukwazi ukudala inkampani esebenza kahle kuphela ngokuqasha inani elikhulu lochwepheshe, njengoba bonke bemuncwa yiqembu noma umnyango othile. Ngakho-ke abaphathi bayaqhubeka nokuqasha ongoti, kepha akukho okuguqukayo ngoba ukwakheka kanye nomqondo wokuhamba komsebenzi awuguquki nakancane.
Uma ungenzi lutho ukudala iziteshi zokuxhumana ngaphakathi nangaphandle kwala maqembu neminyango, yonke imizamo yakho iyoba yize. Kungakho isu lokuxhumana nokuvuthwa kugxila ku-Ahava.
Umthetho KaConway Usetshenziselwe Izinkampani Zezibalo
Eminyakeni engamashumi amahlanu edlule, umdidiyeli wohlelo omkhulu ogama lakhe linguMelvin Conway wenza isiphakamiso kamuva esaziwa ngokuthi umthetho kaConway:
Izinhlangano ezakha izinhlelo. . . Kuphoqelekile ukukhiqiza imidwebo engamakhophi ezinhlaka zokuxhumana zalezi zinhlangano.
UMelvin Conway, Umthetho KaConway
Le micabango yavela ngesikhathi lapho ikhompyutha eyodwa ilingana kahle ikamelo elilodwa! Cabanga nje: Lapha sineqembu elilodwa elisebenza kwikhompyutha eyodwa, futhi lapho sinelinye iqembu elisebenza kwenye ikhompyutha. Empilweni yangempela, umthetho kaConway usho ukuthi wonke amaphutha okuxhumana avela kulawo maqembu azokhonjiswa ekwakhiweni nasekusebenzeni kwezinhlelo abazenzayo.
Le mbono ihlolwe izikhathi ezingamakhulu ezweni lentuthuko futhi kuxoxwe ngayo kakhulu. Incazelo eqonde kakhulu yomthetho kaConway yadalwa nguPieter Hintjens, ongomunye wabahleli bohlelo abanethonya elikhulu ekuqaleni kweminyaka yama-2000, owathi “uma usezinhlanganweni ezicijile, uzokwenza isoftware ebukekayo.” (I-Amdahl kuya kwi-Zipf: Imithetho Eyishumi ye-Physics of People)
Kulula ukubona ukuthi lo mthetho usebenza kanjani emhlabeni wokumaketha nowama-analytics. Kulo mhlaba, izinkampani zisebenza ngamanani amakhulu emininingwane eqoqwe evela emithonjeni ehlukene. Sonke singavuma ukuthi idatha uqobo lwayo ilungile. Kepha uma uhlola amasethi wedatha eduze, uzobona konke ukungapheleli kwezinhlangano eziqoqe leyo datha:
Kushoda amanani lapho onjiniyela bengakhulumanga khona ngodaba
Amafomethi angalungile lapho kungekho muntu onake futhi kungekho muntu okhulume ngenombolo yezindawo zamadesimali
Ukubambezeleka kwezokuxhumana lapho kungekho owazi ifomethi yokudlulisa (i-batch noma ukusakaza) nokuthi ngubani okumele athole imininingwane
Kungakho izinhlelo zokushintshaniswa kwedatha ziveza ukungapheleli kwethu ngokuphelele.
Ikhwalithi yedatha ukufeza ochwepheshe bamathuluzi, ochwepheshe bokuhamba komsebenzi, abaphathi, kanye nokuxhumana phakathi kwabo bonke laba bantu.
Izakhiwo Zokuxhumana ezihamba phambili futhi ezimbi kunazo zonke zamaThimba ahlukahlukene
Ithimba elijwayelekile lephrojekthi enkampanini ye-MarTech noma ye-analytics yenkampani iqukethe ongoti bebhizinisi (i-BI), ososayensi bedatha, abaklami, abathengisi, abahlaziyi, nabahleli bohlelo (kunoma iyiphi inhlanganisela).
Kepha kuzokwenzekani eqenjini elingaqondi ukubaluleka kokuxhumana? Asibone. Abahleli bezinhlelo bazobhala ikhodi isikhathi eside, bezama kanzima, kanti enye ingxenye yeqembu izolinda nje ukuthi badlulise induku. Ekugcineni, inguqulo ye-beta izokhishwa, futhi wonke umuntu uzobubula ngokuthi kungani kuthathe isikhathi eside kangaka. Futhi lapho kuvela iphutha lokuqala, wonke umuntu uzoqala ukufuna omunye umuntu azomsola kepha hhayi izindlela zokugwema isimo esibabeke lapho.
Uma sibheka ngokujulile, sizobona ukuthi izinhloso zombili bezingaqondakali kahle (noma nhlobo). Futhi esimweni esinjalo, sizothola umkhiqizo owonakele noma onamaphutha.
Izici ezimbi kakhulu zalesi simo:
Ukubamba iqhaza okunganele
Singayilungisa kanjani? Ngempela ngokwenza abantu bakhulume.
Masiqoqe wonke umuntu ndawonye, ​​setha izihloko zokuxoxisana, futhi sihlele imihlangano yamasonto onke: ukumaketha nge-BI, abahleli bezinhlelo nabadwebi kanye nochwepheshe bedatha. Ngemuva kwalokho sizothemba ukuthi abantu bazokhuluma ngale phrojekthi. Kepha lokho akukwanele ngoba amalungu eqembu awakhulumi ngawo wonke umsebenzi futhi awakhulumi neqembu lonke. Kulula ukungena eqhweni ngaphansi ngamashumi emihlangano futhi akukho ndlela yokuphuma futhi ungenasikhathi sokwenza umsebenzi. Futhi leyo milayezo ngemuva kwemihlangano izobulala sonke isikhathi nokuqonda kokufanele ukwenze ngokulandelayo.
Kungakho ukuhlangana kuyisinyathelo sokuqala kuphela. Sisenezinkinga ezithile:
Ukuntuleka kwezinhloso zombili
Kwesinye isikhathi, abantu bazama ukudlulisa imininingwane ebalulekile mayelana nephrojekthi kozakwabo. Kepha esikhundleni sokungena komyalezo, umshini wamahemuhemu ubenzela konke. Lapho abantu bengazi ukuthi bangabelana kanjani ngemicabango nemibono yabo kahle nasendaweni efanele, imininingwane izolahleka isendleleni eya kumamukeli.
Lezi yizimpawu zenkampani elwa nezinkinga zokuxhumana. Futhi kuqala ukubelapha ngemihlangano. Kepha sihlala sinesinye isixazululo.
Hola wonke umuntu ukuthi akhulume ngomsebenzi.
Izici ezinhle zale ndlela:
Ulwazi nokwabelana ngamakhono
Lesi yisakhiwo esiyinkimbinkimbi kakhulu okunzima ukusakha. Ungazi izinhlaka ezimbalwa ezithatha le ndlela: Agile, Lean, Scrum. Akunandaba ukuthi uyiqamba ini; zonke zakhiwe kumgomo "wokwenza konke ndawonye ngasikhathi sinye". Onke lawo makhalenda, ulayini womsebenzi, izethulo zamademoni, nemihlangano yokuma kuhloswe ngayo ukwenza abantu bakhulume ngale phrojekthi kaningi futhi bebonke.
Kungakho ngithanda kakhulu i-Agile, ngoba ifaka ukubaluleka kokuxhumana njengemfuneko yokusinda kwephrojekthi.
Futhi uma ucabanga ukuthi ungumhlaziyi ongamthandi u-Agile, kubheke ngenye indlela: Kukusiza ukukhombisa imiphumela yomsebenzi wakho - yonke idatha yakho esetshenzisiwe, lawo madeshibhodi amahle, amasethi wedatha yakho - ukwenza abantu thokozela imizamo yakho. Kepha ukwenza lokho, kufanele uhlangane nozakwenu ukhulume nabo etafuleni eliyindilinga.
Yini elandelayo? Wonke umuntu useqalile ukukhuluma ngale phrojekthi. Manje sesinakho ukufakazela ikhwalithi wephrojekthi. Ukwenza lokhu, izinkampani ngokujwayelekile ziqasha umxhumanisi oneziqu ezisezingeni eliphakeme kakhulu zobuchwepheshe.
Umbandela omkhulu womxhumanisi omuhle (ngiyakutshela ngoba ngingumxhumanisi) uhlala unciphisa ukuzibandakanya kwakhe kuphrojekthi.
Umxhumanisi akakwazi nje ukondla inkampani izingcezu ezincane zezimfihlo zobuchwepheshe ngoba lokho ngeke kwenze inkampani ivuthwe futhi izondle. Uma inkampani yakho ingakwazi ukuhlala ngaphandle komxhumanisi wakho, kufanele ucabangele ikhwalithi yensizakalo oyitholile.
Ngale ndlela, umxhumanisi akufanele akwenzele imibiko noma abe yizandla ezingeziwe kuwe. Unabalingani bakho bangaphakathi balokho.
Inhloso enkulu yokuqasha umxhumanisi yimfundo, ukulungisa izakhiwo nezinqubo, nokwenza lula ukuxhumana. Indima yomeluleki akusikho ukubika nyangazonke kepha kunalokho uzifaka yena kuphrojekthi futhi ubambe iqhaza ngokuphelele ekwenzeni nsuku zonke kweqembu.
Enhle umeluleki wezokukhangisa kugcwalisa izikhala olwazini nasekuqondeni kwabahlanganyeli bephrojekthi. Kepha kungenzeka angaze enzele othile umsebenzi. Futhi ngolunye usuku, wonke umuntu uzodinga ukusebenza kahle ngaphandle komxhumanisi.
Imiphumela yokuxhumana ngempumelelo ukungabikho kokuzingelwa kwabathakathi nokukhomba ngeminwe. Ngaphambi kokuba umsebenzi uqalwe, abantu babelana ngokungabaza nemibuzo yabo namanye amalungu eqembu. Ngakho-ke, izinkinga eziningi zixazululwa ngaphambi kokuqala komsebenzi.
Ake sibheke ukuthi konke lokho kuthinta kanjani ingxenye eyinkimbinkimbi kakhulu yomsebenzi wokuhlaziya ukumaketha: ukuchaza ukugeleza kwedatha nokuhlanganisa idatha.
Sakhiwa Kanjani Isakhiwo Sokuxhumana Ekudlulisweni Kwedatha nasekuCubungulweni?
Ake sithi sinemithombo emithathu esinikeza imininingwane elandelayo: idatha yethrafikhi, idatha yomkhiqizo we-e-commerce / idatha yokuthenga kusuka kuhlelo lokuthembeka, nedatha yezibalo zeselula. Sizodlula ezigabeni zokucubungula idatha ngamunye ngamunye, kusuka ekusakazeni yonke leyo datha ku-Google Cloud ukuthumela yonke into ukuze ibonwe ngaphakathi Isitudiyo sedatha ye-Google ngosizo luka I-Google BigQuery.
Ngokuya ngesibonelo sethu, imiphi imibuzo okufanele ngabe abantu bayayibuza ukuqinisekisa ukuxhumana okucacile esigabeni ngasinye sokucutshungulwa kwedatha?
Isiteji sokuqoqa idatha. Uma sikhohlwa ukukala okuthile okubalulekile, asikwazi ukubuyela emuva ngesikhathi sibuye silinganise. Izinto okufanele uzicabangele ngaphambili:
Uma singazi ukuthi sisho maphi amapharamitha abaluleke kakhulu nokuhlukahluka, singabhekana kanjani nakho konke ukungcola?
Imicimbi izomakwa kanjani?
Sizoba yini isihlonzi esihlukile sokugeleza kwedatha okukhethiwe?
Sizokunakekela kanjani ukuphepha nokuba yimfihlo?
Sizoyiqoqa kanjani idatha lapho kunemikhawulo ekuqoqweni kwedatha?
Ukuhlanganisa idatha kugeleza ekusakazweni. Cabanga ngalokhu okulandelayo:
Izimiso eziyinhloko ze-ETL: Ingabe i-batch noma uhlobo lokusakaza lokudluliswa kwedatha?
Sizokumaka kanjani ukuhlangana kokudluliswa kwedatha nokusakazwa kwedatha?
Sizozilungisa kanjani ku-schema sedatha efanayo ngaphandle kokulahleka namaphutha?
Isikhathi nesikhathi sokulandelana kwemibuzo: Sizozihlola kanjani izitembu zezikhathi?
Singazi kanjani ukuthi ukulungiswa kwedatha nokucebisa kusebenza kahle ngaphakathi kwezitembu zesikhathi?
Sizokuqinisekisa kanjani ukushaya? Kwenzekani ngokushaya okungavumelekile?
Isigaba sokuhlanganiswa kwedatha. Izinto okufanele uzicabangele:
Izilungiselelo ezikhethekile zezinqubo ze-ETL: Siphathelene ini nedatha engavumelekile?
Isiqephu noma susa?
Singathola inzuzo kuyo?
Izolithinta kanjani ikhwalithi yayo yonke idatha esethiwe?
Umgomo wokuqala wazo zonke lezi zigaba ukuthi amaphutha abekwa ngaphezulu komunye nomunye futhi azuze njengefa komunye nomunye. Idatha eqoqwe ngephutha esigabeni sokuqala izokwenza ikhanda lakho lishe kancane kuzo zonke izigaba ezilandelayo. Futhi umgomo wesibili ukuthi kufanele ukhethe amaphuzu wokuqinisekiswa kwekhwalithi yedatha. Ngoba esigabeni sokuhlanganiswa, yonke idatha izohlanganiswa, futhi ngeke ukwazi ukuthonya ikhwalithi yedatha elihlanganisiwe. Lokhu kubaluleke kakhulu kumaphrojekthi wokufunda ngomshini, lapho ikhwalithi yedatha izothinta ikhwalithi yemiphumela yokufunda komshini. Imiphumela emihle ayitholakali ngemininingwane esezingeni eliphansi.
Lesi yisigaba se-CEO. Kungenzeka uzwile ngalesi simo lapho u-CEO ebheka izinombolo kudeshibhodi bese ethi: “Kulungile, sinenzuzo eningi kulo nyaka, ngisho nangaphezulu kunakuqala, kodwa kungani yonke imingcele yezezimali isendaweni ebomvu ? ” Okwamanje, sekwephuze kakhulu ukubheka amaphutha, njengoba bekufanele ngabe abanjwa kudala.
Konke kususelwa ekuxhumaneni. Futhi ezihlokweni zengxoxo. Nasi isibonelo salokho okufanele kuxoxwe ngakho ngenkathi kulungiselelwa ukusakazwa kwe-Yandex:
Izimpendulo zemibuzo eminingi uzithola kuphela ndawonye neqembu lakho lonke. Ngoba lapho umuntu enza isinqumo ngokuya ngokuqagela noma umbono womuntu ngaphandle kokuhlola umbono nabanye, kungavela amaphutha.
Izinkinga zikhona yonke indawo, ngisho nasezindaweni ezilula kakhulu.
Nasi esinye isibonelo: Lapho ulandela imiphumela yamakhadi womkhiqizo, umhlaziyi ubona iphutha. Kumininingwane eshisiwe, konke okuvelayo okuvela kuwo wonke amabhanela namakhadi womkhiqizo kuthunyelwe ngemuva kokulayishwa kwekhasi. Kepha asikwazi ukuqiniseka ukuthi umsebenzisi ubheke ngempela yonke into esekhasini. Umhlaziyi uza eqenjini elizobazisa ngalokhu ngokuningiliziwe.
I-BI ithi asikwazi ukushiya isimo sinjalo.
Singayibala kanjani i-CPM uma singaqiniseki nokuthi umkhiqizo ubonisiwe? Yini i-CTR efanelekayo yezithombe lapho?
Bheka, wonke umuntu, singakha umbiko obonisa i-CTR enhle kakhulu futhi sikuqinisekise ngokumelene nesibhengezo sokudala esifanayo noma isithombe kwezinye izindawo.
Bese kuthi onjiniyela bazothi:
Yebo, singayixazulula le nkinga ngosizo lokuhlanganiswa kwethu okusha kokulandela umkhondo nokuhlola ukubonakala kwezihloko.
Ekugcineni, abaklami be-UI / UX bathi:
Yebo! Singakhetha uma sidinga umqulu ovilaphayo noma waphakade noma ubuqaba ekugcineni!
Nazi izinyathelo leli qembu elincane elidlule kuzo:
Kuthulwe imiphumela yebhizinisi yenkinga
Kukalwe umthelela wezinguquko
Kwethulwe izinqumo zobuchwepheshe
Uthole inzuzo engeyona encane
Ukuxazulula le nkinga, kufanele bahlole ukuqoqwa kwedatha kuzo zonke izinhlelo. Isixazululo esinqunyelwe engxenyeni eyodwa ye-schema yedatha ngeke sixazulule inkinga yebhizinisi.
Yingakho kufanele sisebenzisane. Imininingwane kufanele iqoqwe ngokuziphendulela usuku ngalunye, futhi kuwumsebenzi onzima ukwenza lokho. Futhi i- ikhwalithi yedatha kufanele izuzwe ngu ukuqasha abantu abafanele, ukuthenga amathuluzi afanele, nokutshala imali, isikhathi, nemizamo yokwakha izinhlaka zokuxhumana ezisebenzayo, ezibalulekile empumelelweni yenhlangano.
Tags: IBigQueryukuhlanganiswa kwedathaukudluliswa kwedathaUkubonwa Kwedathaisitudiyo sedatha ye-googleukuxhumana kwezokukhangisaawu biYandexngaleyo metrica
UMariia uyi-Business Development Executive eneminyaka engama-6 + ehlanganisa ukumaketha nokuphathwa komkhiqizo ngemuva. I-OWOX BI isebenzisa ama-analytics okuphela kokuphela futhi ivuselela ngokuzenzakalela imibiko ngemikhankaso yezikhangiso, ukuhlaziywa kweqembu, i-ROPO, i-CPA, i-ROI, i-ROAS, i-LTV, i-САС, isabelo, nokuningi.
Amathiphu avela kumasayithi aguqula okuphezulu